Howlgal lagu soo qabtay Hub iyo Waxyaabaha Maanka Dooriya (SAWIRRO) – Kismaayo24 News Agency
Howlgal lagu soo qabtay Hub iyo Waxyaabaha Maanka Dooriya (SAWIRRO)
by Sakariye Sakariye 29th March 2018 060
Ciidamada ammaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Howlgal xalay ay ka sameeyeen qeybo ka mid ah xaafadaha degmada Wadajir waxa ay ku soo qabteen waxyaabaha Maanka Dooriya oo isugu jira Xashiish, Qamri.
Sidoo kale Ciidamada ayaa intii ay Howlgalka ku jireen waxa ay soo qabteen Laba Qori iyo Laba Bastoolad, kuwaasi oo si sharci daro ah loogu heystay gudaha degmada, mararka qaarna lagu dhibaateyn jiray shacabka.
Guddoomiye ku xigeenka Koowaad ee dhanka siyaasadda iyo amniga Maamulka Gobolka Gobolka Banaadir Maxamed C/laahi Maxamed (Tuulax) iyo saraakiil Ciidan ayaa markii dambe tagay goobta waxyaabahan lagu soo qabtay.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir C/fataax Cumar Xalane ayaa sheegay Howlgalka inuu ahaa mid qorsheysan, laguna doonayay in lagu soo qabto waxyaabaha ka baxsan amniga.
Wuxuu sheegay C/fataax Xalane in Ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen gurigii waxyaabahan lagu soo qabtay, dadkii deganaa iyo Hubkii laga soo qabtay, sharcigana la horgeyn doono.
“Waxaa Howlgal balaarana laga sameeyay degmada Wadajir, Howlgalka wuxuuu ahaa mid qorsheysan, waxaana lagu soo qabtay waxyaabaha maanka dooriya iyo Hub, dhammaan dadkii waxyaabahaas lagu soo qabtay Ciidamada ayaa gacanta ku dhigay, sharciga ayaana la horgeyn doonaa.” Ayuu yiri Afhayeenka Gobolka Banaadir.
Shalay ayay aheyd markii Ciidanka dowladda ee ku sugan Dakadda Magaalada Muqdisho, ay soo bandhigeen Kunteenar ay ka buuxaan Qamri, kadib markii baaris lagu sameeyay, waxaana la xiray ganacsadihii Qamrigaas u soo degay.
Kulamo Xasaasi ah oo Cawada Muqdisho ka socda iyo Mooshinka oo la filaayo in go’aan laga so saaro
Madaxweyne Xasan Muxu ka yiri Heshiiski Galkacyo